प्रस्तुति: इन्फोग्राफिक्सको शक्ति | Martech Zone
प्रस्तुति: इन्फोग्राफिक्सको शक्ति
शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मुहम्मद यासीनले इन्फोग्राफिक सिर्जना, वितरण र पदोन्नतिको शक्ति र रणनीतिमा एक उत्कृष्ट र गहन प्रस्तुति विकसित गरेको छ। हामीले बोलेका छौं इन्फोग्राफिक्सको बारेमा मार्टेकमा केहि थोरै र हाम्रो एजेन्सी पहिले भन्दा धेरै इन्फोग्राफिक्सहरू विकास र डिजाईन गर्दैछ।
तिनीहरू किन यति लोकप्रिय छन्? साधारण कारण यो हो कि इन्फोग्राफिक्स सँग दुबै हुनुको एक संयोजन छ आकर्षक, पोर्टेबल, र सजिलै पचाई। याद गर्नुहोस् मैले भनेन सही? त्यो किनभने मलाई लाग्दैन कि इन्फोग्राफिक्सको उद्देश्य सँधै प्रश्नको उत्तर दिनको लागी हो - कहिलेकाँही यो केवल पाठकलाई शीर्षकमा गहिरो ध्यान दिन उत्प्रेरित गर्नु हो। रणनीतिक दृष्टिकोणबाट, एक इन्फोग्राफिक एक अविश्वसनीय रणनीति हो जुन दुबै खोजी र सोशल मिडियाको लाभ उठाउन सक्छ।
महम्मद हाम्रो ग्राहक, HCCMIS, प्रदान गर्ने कम्पनीका लागि काम गर्दछन् यात्रा चिकित्सा बीमा कम्पनीहरूमा ... हाम्रो विदेशबाट पनि हामी घरेलु रूपमा काम गर्छौं।
टैग: इन्फोग्राफिक्सको विकास गर्नुहोस्इन्फोग्राफिक्स रणनीतिलाभ इन्फोग्राफिक्स
शीर्ष २० व्यवसाय मार्केटिंग ब्लगको नाम राखियो!
इन्फोग्राफिक्स: सोशल मीडिया गोपनीयता
फेब्रुअरी १,, २०११ 25:१:2012 अपराह्न
दयालु शब्दहरूका लागि धन्यवाद, डग।
यो एक शानदार प्रस्तुतीकरण मुहम्मद हो!